पत्रकार ‘साइज’ मा बस्न पर्ने - The Public Today
पत्रकार ‘साइज’ मा बस्न पर्ने
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०९:१२
महोत्तरीको बर्दिवास–१ स्थित नेवारडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बनेका घर । तस्बिर : सुनिता/कान्तिपुर
वनवातावरण र जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा नाउँ कहलिएका एकजना मेरा मित्रले दुई दिनअघि (गतशनिबार) फोन गरेर महोत्तरीको बर्दिवास–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणबारे समचार लेख्ने पत्रकारलाई ‘साइज’मा बस्न उर्दी दिनुभएको छ ।
वन, वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान दिदै आउनु भएका महाशयलाई वनअतिक्रमणबारे लेखिएको समचारले किन पिरोले छ ? म दुई दिनदेखि त्यसको खोजीमै रन्थनिएको छु ।
पत्रकार आफैं त वनको किलाखुट्टा खुट्याउने नापीका विज्ञ त होइनन् । सम्बद्ध कार्यालय (वन) र सरोकारवालाले भनेका कुरा लेखिदिनेसम्मका निमित्तमात्र हुन् । वन अतिक्रमणसम्बन्धी अहिलेका प्रकाशित समचारमा भएको पनि त्यत्ति नै हो ।
एकजना पत्रकार भन्दै हुनुहुन्थ्यो–, पत्रिकामा अतिक्रमणसम्बन्धी समचार आएपछि बर्दिवासकै एक भद्रपुरुषले प्रकाशित समचार सामग्रीप्रति सार्वजनिक रुपमै ‘भत्र्सना’ गर्नु भएको थियो रे…! यद्यपि कुनै वनक्षेत्र अतिक्रमणसम्बन्धी समचारमा कसैप्रति ‘भत्र्सना’ गरिएको मैले पढेको छैन । देखिएका, अझभनौ देखाइएका, सुनाइएका र भनिएका कुरा पस्किनुवाहेक कसैप्रति आग्रहको गन्ध प्रकाशित समचारमा छैनन् । प्रकाशित समचारमै चित्त कुँडिदा त्यसको उपचारको फराकिलो विकल्प हुँदाछँदा बर्दिवासमा सार्वजनिक ‘भत्र्सना’ र ‘साइज’ मा बस्न उर्दी दिने आवश्यकता भद्रजनलाई किन परेछ ? बुझ्न बाँकी छ ।
यसअघि एकजना मित्रले मलाई नै ‘१६ बिघा कित्तामा त वनका डेफु र प्रदेश सचिब तपाईले लानु भएको रे नि त…!’ पनि भन्नुभयो । वनका अधिकारीले अतिक्रमण क्षेत्रको नापजाँच गरेका ठाउँमा उनीहरुकै वोलाहटमा पुग्न त म पनि एकछिन पुगेको थिएँ । पुग्ने कुरा त अरुले बोलाउँदा पनि समयले साथ दिदा पत्रकार पुग्दै नै आएका छन् ।
वनक्षेत्र संरक्षण र अतिक्रमणको बिषयमा आम बर्दिवासवासीको सरोकारजस्तै पत्रकारको पनि केही धारणा त हुनसक्छ । तर, यि कुरामा छुट्टै कुनै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका पत्रकार होइनन्, हुँदैनन् । वनसम्बद्ध कार्यालयले अतिक्रमण भएको भनेर खुट्याएको ठाउँमा पनि सो क्षेत्र आफ्नो भएको आधार बताउने जोसुकैको कुरा पनि पत्रकारलाई पस्कन अप्ठ्यारो छैन । त्यसकारण वनक्षेत्र अतिक्रमणका समचारको खण्डनमा उत्रन ‘भत्र्सना’ र ‘साइज’ मा बस्न उर्दी नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन, पर्दैन भन्नेसम्म निवेदन सम्बद्ध भद्रजनसम्म पु¥याउनु यो सामग्रीको अभिष्ठ हो ।
अहिले वनक्षेत्र भनिएको (वनले भनेको) ठाउँमा ग्राहक पु¥याउने, जग्गा किनवेच गर्न सहयोग गर्ने मित्रहरुले ‘पत्रकारले त गौरीडाँडा खाली गराउने भए’ भन्दै मान्छे उराल्न थाल्नु भएको पनि सुन्दैछु । पत्रकार वनक्षेत्र र ऐलानीपर्ति जग्गा फरक कुरा हुन् भन्ने कुरामा सामान्य रुपमा जानकार छन् भन्ने निवेदन गर्नवाहेक ति मित्रलाई अरु के भन्न सकिन्छ र ?
हाँमी पत्रकार भनिने र चिनिएका पनि यसै समाजका अङ्ग हौं । हाम्रो पनि चित्त छ, घटनासन्दर्भले त्यो चित्त कहिले प्रफुल्लित हुन्छ र कहिले कुँडिन्छ पनि । तर, चित्त कुँडिने नै कुरा परेपनि सहेरै निस्कन्छौं , जसरी सार्वजनिक ‘भत्र्सना’ र ‘साइज’ मा बस्ने उर्दी पनि खेपेरै बसेका छौं । वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बरालको फेसबुक स्टासबाट लिइएको
´द पब्लिक टुडे अनलाईन´ पब्लिक टुडे पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित छ । हामी यहाँहरुको अमूल्य सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । इमेल:- p[email protected]